एनएमबि बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुल्ला, व्याजदर कति ? - Arthasansar
एनएमबि बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुल्ला, व्याजदर कति ?
आइतबार, ०२ जेठ २०७८, ०९ : २२ मा प्रकाशित
एनएमबि बैंक लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र आज (आइतबार)बाट निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ ।
बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित दरका २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० लाख कित्ता ऋणपत्र आजदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । २० लाख कित्तामध्ये १२ लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिने तथा ८ लाख कित्ता(सो मध्ये ५% सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको समेत) सर्वसाधारणका निष्काशन गरिनेछ ।
बैंकले १० वर्ष अवधिको वार्षिक ८.५० प्रतिशत व्याजदर भएको "एनएमबि ऋणपत्र ८.५०%- २०८७/८८" जारी गर्न लागेको हो ।
लगानीकर्ता उक्त ऋणपत्रमा जेठ २ गतेदेखि छिटोमा जेठ ५ गते र ढिलोमा जेठ १६ गतेसम्म न्यूनतम २५ कित्तादेखी अधिकतम ८ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
लगानीकर्ताहरुले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं, एनएमबि बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु र नेपाल धितोपत्र बोर्डबबाट मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण सि-आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी मेरो सेयर सफ्टवेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उक्त ऋणपत्रको बिक्री प्रवन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।